स्टाण्डर्डको एफपिओमा ३५ अर्बको आवेदन, बाँडफाँड कहिले?
स्टाण्डर्ड चार्टड बैंकले निश्कासन गरेको एफपिओमा ३५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ। बिक्री प्रवन्धक एनएमबि क्यापिटलका अनुसार प्रारम्भिक आवेदन संकलनका क्रममा ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आवेदन परेको हो। यो माग गरिएको भन्दा १० दशमलव ७ गुणा बढी हो।
क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सृजेश घिमिरेले यो रकममा थप बढ्न सक्ने जानकारी दिए। ‘प्रारम्भिक संकलनका क्रममा ३५ अर्बको आवेदन देखिएको छ, आस्बा प्रणालीबाट अझै केही आवेदन थपिन सक्ने छ’ सेतोपाटीसित उनले भने।
घिमिरेका अनुसार आवेदकको संख्या २ लाख १४ हजारको हाराहारीमा रहेको छ। आस्बा प्रणालीमार्फत परेको रकम ठूलो तर संख्याका आधारमा पुरानै प्रणालीबाट भर्नेहरु धेरै रहेको उनले बताए। ‘करिब १ लाख ४० हजारको संख्याले पुरानै तरिकाले आवेदन भरेका छन्’ घिमिरेले भने ‘रकमका आधारमा भने आस्बा प्रणालीको धेरै छ।’
आस्बाबाट आवेदन भर्दा ब्याज नोक्सान नपर्ने भएकाले ठूला लगानीकर्ता यही प्रणालीमा आकर्षित भएको पाइन्छ। कम्पनीको एफपिओमा न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २५ हजार ५ सय ८० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन पाइने व्यवस्था गरिएको थियो।
कुल २५ लाख ५८ हजार १ सय ४० कित्ता एफपिओ निश्कासन भएको हो। चैत १ देखि ४ गतेसम्म निश्कासन भएको एफपिओको मूल्य प्रतिकित्ता १२ सय ९० रुपैयाँ राखिएको थियो। आइतबार कारोबार बन्द हुँदा उसको सेयर मूल्य बजारमा १९ सय ९२ रुपैयाँ छ।
बाँडफाँड कहिले होला ?
एफपिओ जतिसक्दो चाँडै बाँडफाँड गर्नेगरी कामलाई द्रुत गति दिइने एनएमबि क्यापिटलले जनाएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेका अनुसार निश्कासन बन्द भएको ४० दिनकै आसपासमा बाँडफाँड हुनेगरी अघि बढाइनेछ।
३५ अर्बको आवेदन परेकाले वैधानिक रुपमा समयसीमा २ महिना हुन आउँछ। ‘दुई महिना लगाइँदैन, सकेसम्म ४० दिनभित्रै बाँडफाँड हुनेछ’ घिमिरेले भने। क्यापिटलका अनुसार बाँडफाँडको नतिजा फारम नम्वरका आधारमा नभई डिम्याट खाताको बेनिफिसियल ओनर (बिओ) आइडी नम्वरका आधारमा सार्वजनिक गरिने छ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र ६, २०७३ १६:४८:१०